Gaaffii Hin Fudhatnu!! Isa Isinitti Himnu Qofa Fudhaa!! Jedhchuun Hogganooti Wayyaanee Barattoota Oromoo Mirga Gaaffii Dhorkaa Jiru. | QEERROO
Posted on September 1, 2014 by Qeerroo
1 thought on “Gaaffii Hin Fudhatnu!! Isa Isinitti Himnu Qofa Fudhaa!! Jedhchuun Hogganooti Wayyaanee Barattoota Oromoo Mirga Gaaffii Dhorkaa Jiru.”